Coral Reef: ကျွန်မ၏ကဗျာ
Thet Naing Tun said on September 16, 2012 at 6:31 PM
Yes, that really is, the beautiful poem.
Shinlay said on September 17, 2012 at 12:37 AM
ရောက်တယ်ညီမ။ ကဗျာကောင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ အတူ
Nyi Linn Thit said on September 18, 2012 at 5:26 AM
♫♪ မင်း ဘယ်နေရာမှာလဲ အချစ်.. ကမ္ဘာမြေ တဖက်စွန်းထိ.. ငါပျံသန်းလာမယ်..♪♪♫
သိပ်ဟုတ်တာပေါ့၊ ဒီလိုအခြေအနေမှာ သီချင်းတစ်ပုဒ် ကို ဆိုညည်းရမယ်ဆိုရင် အဖြစ်သင့်ဆုံး သီချင်းဟာ ဒီသီချင်းပဲ ဖြစ်သင့်တာပေါ့၊ နှုတ်နဲ့ ရွတ်ဆိုခွင့် မရလိုက်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို နှလုံးသားနဲ့ ကြားသွားခဲ့မှာ သေချာပါတယ်၊ တခါတခါမှာ မကြားရတဲ့ ကဗျာတွေက ပိုပြီးခမ်းနားတတ်တယ် မဟုတ်လား၊ ပြေပြေပြစ်ပြစ်နဲ့ စီးဆင်းသွားတဲ့ ပို့စ် လေးပါပဲ ဇွန်ရေ...။
Ingjin Thant said on September 18, 2012 at 8:37 AM
Sis, I'm speechless!
မိုးနတ်ကြယ်စင် said on September 18, 2012 at 9:05 PM
Anonymous said on September 24, 2012 at 10:34 PM
အက်ဆေးကောင်းလေး ဖတ်သွားတယ် အမ။